७ सय चिनियाँ नागरिक नेपाल भित्रिए, कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा नेपाल देश – " सुलभ खबर "
७ सय चिनियाँ नागरिक नेपाल भित्रिए, कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा नेपाल देश
काठमाडौं । जनवरी १५ तारेखमा चीनबाट अमेरिका फर्किंदा मेडिकल ‘स्कृनिङ’ मा सकुशल देखिएका एक यात्रुमा चार दिनपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । अमेरिकाले ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरेपछि फर्किएका ती यात्रु अमेरिकाको पहिलो कोरोना संक्रमित हुन् र हालसम्म अमेरिकामा यस्तो संक्रमितको संख्या एक दर्जन पुगेको छ ।
तर, शक्तिशाली एवं स्रोत साधनसम्पन्न मुलुक चीनलाई कोरोना भाइरसको त्रासले आच्छु-आच्छु पारिरहँदा छिमेकी मुलुक नेपालमा सरकारले अक्षम्य लापरबाही गरिरहेको छ । चीनको सरकारले पुरै शक्ति लगाउँदा पनि संक्रमण फैलिन रोकिएको छैन र मृतकको संख्या दिनदिनै बढेको बढ्यै छ । तर, नेपालमा भने सरकारी स्तरबाट लापरबाही भइरहेको छ ।
छिमेकी मुलुकमा यस्तो डरलाग्दो संक्रमण फैलिँदै गर्दा त्यसलाई रोक्न नेपालले के गर्दैछ त ? वुहानमा रहेका १८० नेपालीलाई समेत स्वदेश ल्याउन नसकेको नेपाल सरकारले कोरोनाको जोखिमबाट बच्नका लागि देशभित्र जुन रुपमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो, त्यो अपनाउन सकेको देखिँदैन । विदेशबाट कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन अहिलेसम्म नेपाल सरकारले के- के गर्‍यो ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सागर दाहाल भन्छन्, चीनसँगका नाकाहरु बन्द छन्, विमानस्थल र सबैजसो नाकामा हेल्थ डेस्क छन् ।’
तर, कोरोनाजस्तो डरलाग्दो संक्रमणलाई नेपाल भित्रिन नदिन यतिमात्रै सतर्कता पर्याप्त छ त ? सरकारको भाषामा भन्ने हो भने पर्याप्त मात्रै हैन, विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसार नै काम भइरहेको छ । सरकारको यस्तो जवाफ सुन्दा लाग्न सक्छ, विमानस्थलमा यात्रीहरुमाथि कडा स्वास्थ्य जाँच हुन्छ, चीनबाट फर्किएकालाई त झन विशेष निगरानीमै राखिन्छ होला ।
तर, त्रिभुवन विमानस्थलमा त्यस्तो कुनै दृश्य देख्न पाइन्न, जसले कोरोनासँग साँच्चिकै नेपाल सरकार गम्भीर र सतर्क रहेछ भन्ने पुष्टि गरोस् । त्यहाँ शरीरको ज्वरो पत्ता लगाउने मेसिनले स्कृनिङ त गर्छ, तर सामान्य तापक्रम देखिए कसैले पनि विमानस्थलमा अतिरिक्त जाँच गराउनुपर्दैन । विमानस्थलमा रहेको त्यही स्त्रिmनिङ गर्ने मेसिन पनि बारम्बार बिगि्रएर स्वास्थ्यकर्मीलाई हैरानी छ ।
चीनसँगका अन्य नाकाबाट भने आवत-जावत रोकिएकाले खासै समस्या छैन । तर, भारतसँगका नाकामा भने यात्रीको स्वास्थ्य जाँच्ने प्रभावकारी संयन्त्र नै छैन । जसले स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक र नेपाली यात्रीबाट पनि कोरोना भित्रिने जोखिम उच्च बनाएको छ । अझ नेपालमा रोग फैलिहाले के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना पनि बनेको छैन । त्यस्ता बिरामी राख्न केही अस्पतालहरुमा शैया पहिचान गर्नेवाहेक अन्य प्रभावशाली प्रतिरक्षाको योजना नबनाई बसेको छ सरकार ।
सरासर आउँछन् चिनियाँ: वुहानका नेपालीलाई ल्याउन र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस छ । तर, चीनका अन्य प्रान्तबाट दैनिक आइरहेका सयौं यात्रीले नेपालमा सहजै प्रवेश पाएका छन् । वुहानबाहेक अन्य प्रान्त पनि कोरोनाबाट मुक्त नभएकाले सरकारले अहिले अपनाएको नीति प्रत्युत्पादक हुन सक्ने देखिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका अनुसार कोरोनाको संक्रमणको हल्लाका बावजुद पनि विगत ७ दिनमा ७ सय चिनियाँ नागरिक नेपाल आएका छन् । यसअनुसार एक महिनाका बीचमा हजारौं चिनियाँ यात्रु नेपाल आएका छन् ।
अहिले चीनबाट आएका नेपाली नागरिक र चीनलाई ट्रान्जिट पारेर आएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकको संख्या पनि सानो छैन । तर, न उनीहरुको स्वास्थ्यको निगरानी सरकारले गरेको छ, न उनीहरुको विवरण राखेर भविश्यमा पर्न सक्ने संकटसँग जुध्ने तयारी नै भएको छ । विश्वभरका विमानस्थलमा भइरहेको कडा मेडिकल स्कृनिङका अघि नेपालको विमानस्थलमा भइरहेको फितलो जाँच लाजमर्दो छ ।